गोदाममै सडिए राहत सामग्री ! || समाचार
गोदाममै सडिए राहत सामग्री !
access_time 12 Mar 2020
रामेछाप । २०७२ सालको भूकम्पपछि पीडितलाई उपलब्ध गराउन दाताले दिएका लाखौं मूल्यका राहत सामग्री नष्ट हुन थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भण्डारण गरिएका ती सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नभएकाले नासिन थालेका हुन् ।
झन्डै ५ वर्षअघि प्राप्त भएका राहतका सामग्री प्रकोप परेका बेला प्रयोग गर्ने गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिम्मामा राखिएको थियो । रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा विपद्का पीडितहरूलाई सोही भण्डारबाट सामग्री वितरण गर्दै आएको थियो । मौज्दातमा रहेको बंगलादेशबाट प्राप्त चामल भने जिल्ला विपद् समितिको निर्णयअनुसार साबिक ठोसे गाविसमा बाँडिएको थियो । गोदाममा राख्दा सड्ने भएकोले चामल वितरण गरेको समितिले अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सड्न थालेका हुन् ।
गत वर्ष भण्डारणमा रहेका त्रिपाल र मण्डीहरू जिल्लाका सबै आठ वटा स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । रेडक्रस रामेछापका कार्यालय प्रमुख शम्भुबहादुर बुढाथोकीका अनुसार नगर र गाउँपालिकामा दुईदेखि तीन सय मण्डी र चार सय थानका दरले त्रिपाल पठाइएको थियो । बाँकी रहेका त्रिपाल र कम्बल गोदाममै छन् ।
गोदाममा हाल करिब सात हजार पाल, करिब ७० थान कम्बल, ३५ रोल प्लास्टिक, ४२ ग्यास सिलिन्डर, ९ बाकस फ्यामिली कीट र दुई वटा टेन्टसहित अन्य सामग्री थन्किएका छन् । मुसाले खाएको मण्डी कसरी बाँड्नु,’ उहाँले भन्नु्भयो । समितिकी अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले विगतमा भएका कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।